ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ
Posted by phone_kyaw on Feb 14, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
သမီးရည်းစားမဖြစ်ခင် ချစ်သူအတွက် ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် နှင်းဆီပန်းလေး တစ်ပွင့်ပေးရင်ကောင်းမလား။ ဘာများလက်ဆောင်ပေးရင်ကောင်းမလား။ စဉ်းစားရင်းနဲ့ ရင်တွေခုန်၊ ကြည်နူးရတာကိုက အရသာတစ်ခုပဲ။
ချိန်းထားတဲ့နေ့ ရောက်တော့ ၀ယ်စရာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ အိမ်ဘေးက နှင်းဆီပန်းလေးကို ချိုးပြီး အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ ချစ်သူလည်းပျော်၊ ကိုယ်လည်း ကြည်နှုးပေါ့ဗျာ။ ပန်းတပွင့်ကို အရင်းတည်ပြီး ချစ်လားဆိုတဲ့ အဖြေကို တောင်းပါလေတော့တယ်။
“မောင်တို့ ချစ်သူများနေ့ မှာ အချစ်တွေရခဲ့ကြတာပဲဆိုတော့ ဒီနေ့ ကို ဘယ်လို မေ့နိုင်မှာလဲ…မ…ရယ်”
“ဒီနေ့ ….နင်…ငါ့ကို ဘာပေးမှာလဲ”
“နင့်လင်က သူဌေးမို့ လို နင် ဒီလိုစကားပြောနေတာလား”
ခုချိန်ကျတော့မှ ဖျာလိုနင်းပြီး ခင်းအိပ်ချင်နေပြီမို့လားကိုဘုန်းကျော်….
အဲဒီအဆုံးသတ်ကလေး ကတော့ ထိတယ်ဗျာ…ဘ၀ဆန်သွားတာကိုပြတာပေါ့..ပြုံးလဲပြုံးမိပါရဲ့..
မှတ်သားကြ ဂေးဂိုဏ်းသားအပေါင်းတို့သက်တမ်း ၁၀ နှစ်ဆို အဲဒီလိုဖြစ်တတ်ကြတယ်
စည်ပင်မှာအမှိူက်ကောက်တဲ့ ကျုပ်ရည်းစား ကိုလည်း အိုင်ဖုန်းလက်ဆောင်ပေးဖို့ပြောရမယ်..
နောက်ဆုံးပေါ် အိုင်ဖုန်းနဲ့ အခုထုတ်မဲ့ နောက်ဆုံးအော် ၅၀၀၀ တန်ဆင်းကဒ်..Yoh! ကွက်တိ
နင့် လင် က အခု လက်ကြောတင်းနေပြီ လို့ 
ကိုပေ မှားပြီ. နင့်လင်က လက်ကြောမတင်းတော့တာလေ … သူလည်း စာရေးနေတယ်လေ…. :grin: :grin:
ဓားမကြီးပဲ့ပဲ့ အချိန်ကို ကျော်သွားလို့ …… ခီများ ဒီလိုကြောတာ မီဟုတ်လား …
လက်မ ထောင်သွားပါတယ် ကိုဘုန်းကျော်ရေ။
ခလေး ၃ယောက် နဲ့ ဆိုတာ တော်ရုံသတ္တိ မဟုတ်ဘူး။
မညည်းမညူ စောင့်ရှောက် နိုင် တဲ့ ခလေးတို့ အမေ ကို လေးစားချီးကျူးပါရဲ့။
ဒါဟာ သူ့ အတွက် Valentine’s Day စကား လက်ဆောင်ပါ။
မိသားစုလေး ဒါထက် ပိုမို ရွှင်လန်း ပါစေ။ တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ။
အလကားရတဲ့ အနမ်းတွေပေးပလိုက်ပေါ့ ကိုဘုန်းကျော်ရယ် ကဲဟာ ကဲဟာ ကဲဟာ နဲ… ဟဟဟ
ကိုရွှေတိုက်စိုးတို့ ကတော့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့နည်းချည်းဘဲသုံးပြီး အုပ်ထိန်းသူဆီက အမှတ်တွေယူလာတာ ထင်တယ်။ ။ အမှန်ကတော့ မိန်းမတွေဟာကိုယ့်ချစ်သူဆီက လက်ဆောင်ပစ္စည်းထက် ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်ခင်ပွန်းဆီက စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ကြင်နာယုယမှုကိုရတာကို အမျှော်လင့်ဆုံးနဲ့ ၊ အပျော်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ် (မိန်းမချစ်ဆေးပေးတယ်သဘောထားပေါ့)